Rịba ama mgbanwe nke usoro nhazi nke ụlọ ọrụ
Post oge: 09-20-2020
Ezigbo Ndị Ahịa: Ahịa anyị na-agbasawanye n'ihi mmepe na-aga n'ihu na afọ ndị a. Site na September 2020, anyị guzobere ụlọ ọrụ ọhụrụ aha ya bụ Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Jiangsu Jikọọ Industrial Co., Ltd ugbu a bụ ngalaba nke Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Biko mara na. GỤKWUO »
Ihe dị iche n'etiti 304 na 316 igwe anaghị agba nchara
Post oge: 06-11-2020
Mgbe ị na-ahọrọ igwe anaghị agba nchara nke ga-anagide gburugburu ebe obibi, a na-ejikarị igwe anaghị agbazi austenitic. Inwe ezigbo usoro ihe eji arụ ọrụ, nickel na chromium dị elu na steel austenitic na-enyekwa nsị dị egwu. Na mgbakwunye, ...GỤKWUO »